ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်အိန္ဒိယကနေပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအဖြူ-ရောင်စုံကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်သေးငယ်တဲ့အညိုနဲ့ချောကလက် garnets နှင့်အတူအရောင်အဖြူဖြစ်ပါသည်. ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏တဦးတည်းနှင့်အခင်းဖြစ်ပါသည်. ဤလှပသောကျောက်များ၏အလွန်တောက်ပတဲ့အရောင်ဆောက်သောသူသည်မှောင်ဒေသများ၏အခင်းများတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု. ဒါကအိန္ဒိယအတွက်တမီးလ်နာဒူးပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်ပြားများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, အုပ်ကြွပ်နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအရွယ်အစား. သင်ဤကျောက်အတွက်ထုံးစံလုပ်အရွယ်အစားကိုလည်းအမိန့်နိုင်ပါတယ်. ဒီကျောက်၏ရရှိမှုအလွန်ကောင်းလှ၏. ကိုလိုနီဖြူ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဘန်ဂလိုနှင့်အနီးအနားဒေသများတွင်မှာအများအားဖြင့်ပြု.
ရရှိနိုင်အရွယ်အစား ပြား, ကောင်တာများ, tiles, လှမ်း, Risers
အပြီးသတ် အရောင်တင်, Flamed, Leathered, Lapatro
အသုံးပြုခြင်း မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, အခင်း, မြို့ရိုးကိုဝတ်
ကိုလိုနီ White ကကျောက်၏ပြား
သငျသညျအရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကိုလိုနီ White ကကျောက်၏ပြားဝယ်နိုင်:
ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်ကွက်များ
အဆိုပါကိုလိုနီ White ကကျောက်အုပ်ကြွပ်မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်အခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်. သင်တို့သည်လည်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်တွင်ဤအုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. အောက်ပါဒီအဖြူကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်လူကြိုက်များအရွယ်အစားများမှာ :
PCTCW24x12 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာ (2412 ကျောက်ကွက်များ×)
PCTCW24x24 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာ (2424 ကျောက်ကွက်များ×)
PCTCW12x12 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာ (1212 ကျောက်ကွက်များ×)
PTCW60x30 ပွတ်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
PTCW60x40 ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
PTCW40x40 ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
PTCW60x60 ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာပွတ် - အမိန့်တွင်
ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်ကောင်တာများ
ငါတို့သည်လည်းဒီကျောက်အတွက်ကောင်တာများသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ပါစေ. အဆိုပါကောင်တာများစုပ်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဤအလွင်ပြင်အရွယ်အစားပစ္စည်းမှဖြတ်နေကြတယ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျစုပ်အာကာသလိုအပ်လျှင်သင်အသေးစိတ်ကိုနှင့်ပုံဆွဲနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားနိုငျ.
အောက်ပါကိုလိုနီ White ကကျောက်အတွက်ဘုံအရွယ်အစားများမှာ
ကိုလိုနီ White ကကျောက်၏ဈေးနှုန်း
ဤသည်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းပစ္စည်းတစ်ခုအလယ်အလတ်ဖြစ်ပါသည်. စတုရန်းပေနှုန်းစျေးနှုန်းအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, အထူ, နှင့်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကို. ဒီကျောက်များအတွက်စျေးနှုန်းကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲရှိပါသည်.
ကိုလိုနီခေတ် White ကအိန္ဒိယကနေပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး White ကကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အခင်းအဘို့ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤသည်ကျောက်အဆိုပါကက်ရှမီးယား White ကကျောက်များအတွက်အစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည်. ကိုလိုနီခေတ် White ကအဆိုပါကက်ရှမီးယားဖြူ၏တစ်ဦးထက်ပိုတောက်ပဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကျောက်ဖြူနှင့်အတူမီးဖိုချောင်ထဲမှာအဆင်းလှကြည့်, မီးခိုးရောင်နှင့်ဘရောင်းကက်ဘိနက်. သင်သည်မည်သည့်မှောင်မိုက်ကျောက်သို့မဟုတ်ကိုလိုနီအဖြူသူ့ဟာသူနှင့်အတူကိုလိုနီဖြူ၏ backsplash ကိုသုံးနိုင်သည်. လူအများစုဟာဒီကျောက်အကြောင်းကိုအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ. ဒါဟာ nonporous ဖြစ်ပါသည်, အားကြီးသော, အပူခံနိုင်ရည်, ထိုသို့အလွန်ကောင်းသောချောကြာ.
သငျသညျပြားများတွင်ကိုလိုနီအဖြူမဝယ်နိုင်, ကျွန်တော်တို့ဆီကအုပ်ကြွပ်နှင့်ကောင်တာအရွယ်အစား. သင်နှင့်အတူဤလှပသောကျောက်ရောမွှေလို့ရပါတယ် အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်, မြစ် White ကကျောက်, နှင့် အိန္ဒိယ Juparana ကျောက်.
5 ပေါ်အခြေခံကာ 1 မဲ